Isticmaalka Cannabis Si Aad U Seexato Sidoo Kale Ma Sababtaa Riyooyin Waali Ah Saamayn Dhinac Ah? • Dawooyinka Inc.eu
Isticmaalidda xashiishka hurdada sidoo kale ma u keentaa riyooyin waalli ah waxyeellooyin?
Weligaa hurdadaada kama soo toosin oo ma is tiri, "Riyadee xalay baan ku riyooday?" Ama waxaa laga yaabaa inaad leedahay khibrad isku mid ah oo riyo ah marar badan oo aadna xiiseyneyso. Waxa kale oo suuragal ah inaad soo kacday adigoon wax xusuus ah ka hayn riyooyinki aad xalay soo martay. Dhamaanteen waan ognahay sida ay muhiimka kuugu tahay hurdada habeennimo caafimaadka yahay. Ka dib akhristow iyada oo aynu jaleecaynay aasaaska riyada iyo doorka xashiishku ku leeyahay saamaynta ama ku hammiga riyooyinka.
1 Waa maxay riyadu?
2 Marxaladaha kala duwan ee hurdada
3 Xashiishka iyo riyadaada
4 Ugu dambeyntii xashiishadda iyo riyada
Haa, waxay noqon kartaa khibrad qiiro badan inaad ka soo kacdo isla riyadii si isdaba joog ah, gaar ahaan marka aadan xusuusan faahfaahinta. Iyadoo aan loo eegin xaalada khibradaada riyada, waxaan u maleyneynaa inaan dhamaanteen dooneyno inaan falanqeyn karno riyadeena.
Kahor inta aynaan bilaabin, waa in la ogaadaa in aragtida falanqaynta, uu jiro xiriir ka dhexeeya riyadaada iyo xashiishka. Markaad hoos u dhaadhacdo waxa loogu yeero “godka bakaylaha riyada,” ma doonaysid inaad hurdada ka kacdid adoo dareemaya rajo xumo, iyo CBD kaa caawin kara taas. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaanan ka hadlin xiriirka ka dhexeeya xashiishadda iyo riyada, waxaan u baahannahay inaan fahamno macnaha riyada.
Riyooyinku waxay ku dhacaan maskaxdeenna miyir-qabka ah, oo ay abuurtay maskaxdeennu inta aynu seexanno. Riyadaadu waxay dhacdaa inta lagu gudajiro Dhaqdhaqaaqa Degdega ah ee Indhaha (REM) intaad seexanayso, waana marka ay maskaxdaadu firfircoon tahay.
Maaddaama maskaxdaadu aad u firfircoon tahay, waxay sharraxaysaa sababta aad mararka qaarkood u xusuusan weydo faahfaahinta riyadaada markii aad toosto. Markaad xasuusan weydo riyadaada, waxaad dareemeysaa jahwareer, wareer, iyo shucuur maxaa yeelay ma xasuusan kartid macluumaadkaaga miyir-qabka ah.
Dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin in riyadu ay noo geynayso goobteenna hoose si aan ula xiriirno shucuurteenna, u xallino dhibaatooyinka qotada dheer, iyo inaan si fiican u fahamno shucuurteenna. Laakiin maxay yihiin heerarka kala duwan ee hurdada? Waxaan u baahannahay inaan fahanno tan ka hor intaanan ogaan xiriirka ka dhexeeya hurdada, riyada iyo xashiishadda.
Marxaladaha kala duwan ee hurdada
Markaan seexanno, maskaxdeenu waxay maraysaa shan waji oo hurdo ah, REM-da aan horay u soo sheegnayna waa wajiga ugu dheer:
Wejiga koowaad waa hurdo fudud oo dhacda markaad miyir gasho oo aad ka baxdo. Marxaladdan, wax kasta ayaa kugu kicin kara inaad hurdada ka kacdid.
Marxaladda labaad, dareenka maskaxdaada ee maskaxda ayaa bilaabaya inuu gaabis noqdo, isagoo keenaya wajiga saddexaad.
Marxaladda saddexaad waxaad bilaabi doontaa inaad dareento "hirarka Delta" oo leh soo noqnoqosho weyn. Mawjadahaan Delta waxay yihiin hirar maskaxeed sare oo kiliyaha ah oo la xiriira hurdo dheer.
Marxaladda afaraad waxay dhacdaa marka uusan jirin dhaqdhaqaaq isha ah ama dhaqdhaqaaq muruq ah.
Marxaladda shanaad, waxaad isku aragtaa REM, waana marka ay neefsashadaadu noqoto mid aan caadi ahayn. Qiyaasta garaaca wadnahaaga ayaa kor u kici doona, indhahaagu si dhakhso leh ayey u dhaqaaqayaan oo muruqyadaadu si ku meel gaadh ah ayay u curyaan noqonayaan. Marxaladda REM waxay dhici kartaa dhowr jeer intaad seexanayso, iyadoo ku xidhan hadba inta aad seexato.
Wareegga hurdada oo buuxda wuxuu soconayaa 100 daqiiqo muddada ugu horraysa ee REM waxay bilaabmaysaa inta u dhexeysa 70-90 daqiiqo ka dib markaad seexato. REM sidoo kale waxay socotaa 10-20 daqiiqo, taas oo macnaheedu yahay in riyadaadu ay sidoo kale ka dhacayso waqtigan.
Ma garanaysid barta aad gasho REM, dabcan, maxaa yeelay taasi waa hurdo qoto dheer, laakiin hadda waad ogtahay in riyadaadu aysan ka dhicin marxaladda koowaad. Sidaa darteed, wax kasta oo aad ku riyootid waxay ka yimaadaan meel maskaxdaada miyir-qabka ah, oo ay ku dheehan tahay shucuurta, macluumaadka quudinaya maskaxdaada iyo waayahaaga (hore ama hadda).
Marka maxaa isku xira riyada iyo xashiishka?
Isticmaalidda xashiishka hurdada sidoo kale ma u keentaa riyooyin waalli ah waxyeellooyin? (afb.)
Xashiishka iyo riyadaada
Waxaa la ogaa sanado badan in xashiishadda ay xakamayn karto riyada saameynta ay leedahay THC maskaxda. Dadka isticmaala xashiishka waxay badanaa ka hadlaan sida ay u arkaan hoos u dhac ku yimaada REM markay seexdaan.
Laakiin markaa waxay sidoo kale la kulmaan hurdo qoto dheer, taas oo qofka u keenta inuu si qoto dheer ugu fooraro heerka miyir-qabka. Tani waa caadi, maxaa yeelay hurdo qoto dheer ayaa ah nooca nasashada badan ee aad waligaa la kulmi doonto.
Maaddaama aad la kulmi doontid hoos u dhac ku yimaada dhaqdhaqaaqa maskaxda firfircoon intaad seexanaysid, THC ee xashiishka ayaa kaa caawin doonta inaad ku sii sugnaato adduunyada miyir-qabka muddo dheer oo kugu filan inaad hurdo fiican seexato. Dadka la ildaran xanuunka murugada ka dib ama hurdo la’aanta waxay u baahan yihiin xashiishad si ay u dejiso dhaqdhaqaaqa maskaxda, taas oo u tarjumeysa riyooyin deggan.
Haddii aad waqti badan ku qaadato hurdo dheer ka dib qaadashada THC, waxaa laga yaabaa inaadan u soo kicin sida ugu cad ee ku saabsan riyadaada, laakiin waxaad heli doontaa khibrad hurdo oo aad u fiican.
Khibrad qoto dheer oo ku saabsan riyooyinka iyo si aad u hesho caddayn badan oo ku saabsan riyadaada, waxaad u baahan kartaa inaad yareyso qaadashadaada THC ka hor intaadan seexan. Qaadashada qadar sare waxay maskaxdaada ka dhigeysaa mid aad u firfircoon, kuu oggolaaneysa inaad yeelato riyooyin faahfaahsan oo aad xasuusato markii aad toosto.
Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in si lama filaan ah loo joojiyo xashiishadda waxay u horseedi kartaa waxa lagu tilmaamay "REM rebound", oo gebi ahaanba beddeli doonta qaababka riyadaada. Haddii ay tahay inaad joojiso isticmaalka xashiishka, ku bilow inaad hoos u dhigto qiyaastaada si tartiib tartiib ah iyo koror halkii aad si kadis ah u joojin lahayd.
Ugu dambeyntii xashiishadda iyo riyada
Xashiishadda cannabis wax badan baa isbeddelay sannadihii la soo dhaafay. Si ka duwan sidii hore, waxaan hadda aragnaa inay ku soo kordhayso wadahadal kasta. Waxa loogu yeero "god bakayle" waa maskaxdaada miyir-qabka ah halkaasoo waxqabadyada riyada oo dhami ay dhacayaan, inaad hoos ugu dhaadhacdo godka bakaylaha waa wax dhaca markaad seexato. Markaad isticmaashid xashiishad, THC waxay ka kooban tahay ficillo xakameyn, oo ku siinaya khibrado riyo oo deggan.
Haddii aad rabto inaad xasuusato faahfaahinta riyadaada, waad kordhin kartaa qaadashadaada CBD ka hor intaadan seexan. Laakiin haddii aadan rabin inaad xasuusato faahfaahinta, waa caadi inaad hoos u dhigto qiyaastaada.
Maandooriyaha xashiishka, waad la wareegi kartaa habka aad ku riyooneyso adoo go aansanaya waxa aad xusuusato iyo waxa aadan xusuusan. Waxaad sidoo kale go'aansataa inaad hesho hurdo qoto dheer ama hurdo kugu filan oo aad ku adkeyn karto riyadaada markaad toosto.
Haddii aadan waligaa ka fikirin riyadaada iyo weed qaadashadaada, hadda waa wakhti ku habboon inaad isku daydo oo aad fiiro gaar ah u yeelato. Waxaad dareemi kartaa qaab cusub oo la xiriira haddii aad riyooyin ku aragtid ama aad ku raaxeysatid hurdo nasasho leh oo qoto dheer!
Ilaha ay ka mid yihiin Cannabis.net (EN), Mindhacks (EN), TheFreshToast (EN), WayOfLeaf (EN), WestWord (EN)
cannabisCBDriyooyincaafimaad lehcaafimaadkacilmi baarisseexoTHC
Costa del Sol oo lagu afduubay maafiyada daroogada ee Dutch: Cadaalada Spanish-ka ayaa codsanaya caawimaad
Booliska Isbaanishka iyo garsoorka ayaa aad uga walaacsan rabshadaha badan, inta badan la xiriira daroogada, dhacdooyinka ku lug leh ...
Luxembourg waxay ku dhowdahay diyaar u ah sharci-dejinta cannabis ee waddanka kowaad ee Yurub
Luxembourg waa waddankii ugu horreeyay Yurub ee isu diyaariya sharciyeynta labada daawo iyo ...
Sucuudiga Maraykanku wuxuu doonayaa inuu maalgashado shirkad Canadian Canadian ah
Altria, soo saaraha noocyada sigaarka sida Marlboro iyo Lucky Strike, ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo weed. Mareykanka ...